အမြိုးသမီးမြား Primobolan (Methenolone Acetate) ယူလို့ရပါသလား? | AASraw အမှုန့်
/ဘ‌‌လော့ခ်/Pregabalin/အမြိုးသမီးမြား Primobolan (Methenolone Acetate) ယူလို့ရပါသလား?
အပေါ် Posted 11 / 29 / 2017 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် Pregabalin.
ဘာဖြစ်သလဲ Primobolan (Methenolone Acetate)?
ဘယ်မှာမှ အွန်လိုင်းစစ်မှန်သော Primobolan (Methenolone Acetate) ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်?
Primobolan (Methenolone Acetate) အမှုန့်အရင်းအမြစ်များစွာကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်အွန်လိုင်းစစ်မှန်သော Primobolan (Methenolone Acetate) ကုန်ကြမ်းများကို ၀ ယ်ရန်ခက်ခဲသည်။ စျေးကွက်တွင်ထုတ်ကုန်အတုများရောင်းသည့်ရင်းမြစ်များစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် Primobolan (Methenolone Acetate) ကုန်ကြမ်းများကိုသင်အွန်လိုင်းဝယ်ယူသောအခါသင်ရွေးရန်လိုအပ်သည် realiable အရင်းအမြစ်.
ဘယ်လိုလဲ Primobolan (Methenolone Acetate) အလုပ်များ?
Methenolone dihydrotestosterone တစ်ဆင်းသက်လာ (DHT) သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. တိတိကျကျ DHT တစ်ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ကာဗွန်တဦးတည်းနှစ်ဦးမှာတစ်ဦးကနှစ်ဆနှောင်ကြိုးအလှည့်၌အလွန်ဟော်မုန်းရဲ့ဟိုသဘောသဘာဝတိုးပွါးသော DHT ဟော်မုန်း, ထည့်သွင်းထားသည်။ ဒါဟာအစ Hepatic ပျက်ပြားကနေကာကွယ်ပေးသည်ကြောင်းတစ်ဦးကဆက်ပြောသည် 1-methyl အုပ်စုတစ်စုသယ်ဆောင်။ အဆိုပါ Acetate ၏ထို့အပြင် Ester နောက်ထပ် Hepatic ဇီဝြဖစ်ကနေကာကွယ်ပေးသည်။
တစ်ဦးပါးစပ် Steroid တစ်မျိုးအဖြစ်, Primobolan တစ် C17-alpha-alkylated (C17-aa) Steroid တစ်မျိုးမဟုတ်ကြောင်းတည်းသောပါးစပ် steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ စံ C17-aa ဖွဲ့စည်းပုံမှာမချို့တဲ့ဘဲစေ့စပ်ဒီလည်းပါးစပ် Primobolan အသည်းမှအဆိပ်မဟုတ်ဘူးဆိုလိုသည်။ ဒီဆုကြေးငွေနေစဉ်သို့သော်အများစုမှာပါးစပ် Primobolan စွမ်းရည်တိုးမြှင့်မယ့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အများအပြားအခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးအတော်လေးပျော့သို့မဟုတ်ပင်တစ်ပါတ် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ယောက်ျားအများအပြားဟိုစတီရွိုက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဟိုလှုပ်ရှားမှု၏တူညီသောအဆင့်အထိကိုတွေ့ကြုံခံစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဘယ်သူမျှမအမှား Make, Primobolan တစ်စွမ်းဆောင်ရည်စွမ်းရည်အတွက်နေရာမှရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အများဆုံးလူတို့သညျ Depot ဗားရှင်းပိုကောင်းတဲ့ခေါ်ဆိုခဖြစ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ မိန်းမတို့အဘို့အဖြစ်, ဒီပျော့သဘောသဘာဝကစိတ်ကူးရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေသည်ဘယ်အရာကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Methenolone ဟော်မုန်းအများအပြားသည်အခြားဟို steroids ဆင်တူအများအပြားစရိုက်များသယ်ဆောင်။ ဒါဟာဟော်မုန်း (ကဒီဂရီမှ) ပရိုတင်းပေါင်းစပ်မြှင့်တင်ရန်မည်ဖြစ်ပြီးတစ်ဦးအလယ်အလတ်သွေးနီဆဲလ်အရေအတွက်တိုးပွားလာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ပါသည်။ သို့သော် Steroid တစ်မျိုးအရာအားလုံးထက်ထက်ပိုပါကခွဲခြားသုံးအရေးကြီးသောစရိုက်များသယ်ဆောင်။ Primobolan သိသိသာသာနိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါက catabolic ပြည်နယ်ရှောင်ရှားနေပါတယ်သေချာနှင့်ပိန်ကြုံသောတစ်ရှူးတည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်လည်းစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤ Steroid တစ်မျိုးအရွယ်အစားတွေအများကြီးပေါ်ထုပ်ပိုးမည်မဟုတ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်, စိတျထဲတှငျကြောင်းစောင့်ရှောက်လော့။ ဟော်မုန်းကိုလည်းအန်ဒရိုဂျင် receptor များအတွက်အလွန်ခိုင်မာတဲ့စည်းနှောင်ဆှဖှေဲ့ရှိသည်ဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါအန်ဒရိုဂျင် receptor ဖို့ခိုင်မာတဲ့စည်းနှောင်တိုက်ရိုက် lipolysis ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အများစုမှာအားလုံးဟို steroids အဆိုပါဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်, ဒါပေမယ့်သူကမကြာခဏလူသိများရဲ့အဖြစ် Primo တိုက်ရိုက်အဆီဆုံးရှုံးမှုကိုထောကျပံ့ဖို့ပုံရသည်။ ကျွန်တော်နိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုအတွက်သိသိသာသာတိုးမြှင့်နှင့်အတူဤအမှုကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကဒီဖြတ်တောက်ခြင်းအဆင့်အဘို့ခိုင်ခံ့ဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်သွားကြည့်ရှုရန်စတင်နိုင်ပါတယ်။
Primobolan ၏နောက်ဆုံးအရေးကြီးသောရိုက၎င်း၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။ အဆိုပါ Methenolone ဟော်မုန်းသိသိသာသာကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကမြှင့်တင်ရန်ပြသလျက်ရှိသည်။ တကယ်တော့ဒါဟာအောင်မြင်စွာ AIDS ရောဂါရှိသူများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့တစ်ဦးချင်းအဘို့, သူတစ်ဦးကိုယ်ခံအားတိုးမြှင့်သော်လည်းကြွက်သားပိန်သည်အဘယ်အရာကနေတိုက်ရိုက်ကာကွယ်မှုရရှိသွားတဲ့မသာ။ ဒါဟာတူညီတဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြှင့်တင်ပေးအလွန်ဖြတ်တောက်ခြင်းအဆင့်စဉ်အတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်များကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်အားကစားသမားအကြိုးရှိပါလိမ့်မယ်။
17146 Views စာ
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Cetilistat ကုန်ကြမ်းအမှုန့် အထီးစွမ်းရည်မြှင့်လိင်ဟော်မုန်းကုန်ကြမ်း Jinyang အယ်လကာလီအမှုန့်